Barnaamijka Vibrant & Equitable Communities wuxuu leeyahay aragti cad oo mustaqbal ah oo dhamaan reer Minnesota ay wadaagaan awood, kaqeybgal, iyo barwaaqo. Sawir ayaa la qaaday ka hor faafida. Sumcadda sawirka: Akadamiyadda Summit
Wadahadal lala yeeshay McKnight's David Nicholson
Maqaalka soo socda waxaa markii hore daabacay Xarunta Qaranka ee Filashada Qoyska markay tahay Maarso 2, 2021. Waxaa halkan lagu daabacayaa iyadoo la haysto ogolaansho buuxa.
Machadka McKnight wuxuu hirgaliyay barnaamij cusub oo loogu tala galay sinaanta iyo ka mid ahaanshaha gobolkeena. David Nicholson, oo ah agaasimaha barnaamijka Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah barnaamijka, wuxuu la wadaagayaa sida kooxdaasi uga fikireyso isbeddelada nidaamyada iyo waxa ay ilaa hadda barteen.
David Nicholson, agaasimaha barnaamijka bulshooyinka firfircoon & sinnaanta
S: Markaad tahay samafal qoys, sidee u aragtaa doorkaaga inaad sinnaanta jinsiyadeed horay ugu socoto? Iyo sidee ugu beddelaysaa nidaam dhan iyo bulshada xagga sinnaanta hammi galay ficil?
Daa’uud: Soddonkii sano ee nidaamyadeyda aan isbedelka ku shaqeynayey iyadoo loo marayo hogaaminta bulshada iyo dhismaha dhaqdhaqaaqa aasaasiga, waxaan dareemay isbedel ku saabsan sida ururada ay uga hadlayaan uguna babac dhigayaan naftooda inay xalliyaan isbeddelada nidaamyada. Wadahadalladani waxay ku qaadanayaan marxaladda dhexe qolalka guddiga, Qolalka-soo-baxa, iyo kulamada kooxeed ee ka dhaca goobta oo dhan.
Nidaamka isbadalka badan ee barashada iyo dhageysiga, Machadka McKnight wuxuu ku degay meel aan si toos ah uga hadlayno cunsuriyada qaabdhismeedka. Waxaan raadineynaa inaan fahanno sida taasi uga muuqato bulshada dhexdeeda iyo ururkeena.
Gole kasta, shaqaale, ama koox kasta, tani waxay qaadataa waqti-iyo kalsooni. Waxay dadka ku riixaysaa xadka ay isweydiinayaan: “Ma ku aqaan si fiican oo kugu filan inaad ka hadasho arrintan? Miyaan ku kalsoonahay naftayda inaan la xiriiri karo lana fahmi karo ujeedka? ” Siyaabaha qaarkood, waxaa jira walaac sare oo ku saabsan sida dadku uga hadlayaan jinsiyadda iyo sinnaanta. Haddana waxaan ku dhiirrigelinayaa guddiyada iyo ururada inay la joogaan oo ay geesinimo muujiyaan.
“Barnaamijka Vibrant & Equitable Communities wuxuu leeyahay aragti cad oo mustaqbal ah oo dhamaan reer Minnesota — Madow, cadaan iyo bunni; Dhalad iyo cusub; laga soo bilaabo dhinaca Waqooyiga ilaa Xeebta Waqooyiga - waxay wadaageen awood, kaqeybgal, iyo barwaaqo. ” —DAVID NICHOLSON, MUUQAALKA & BARNAAMIJKA BULSHADA AGAASIMAHA BULSHADA
S: Iyada oo Covid-19 iyo xisaabinta midabka, waxaan ku jirnaa waqti aan caadi aheyn. Sidee daqiiqadani saameyn ugu yeelatay habka barnaamijkaaga deeq-lacageedka?
David: Waxaan ka bilownay barnaamijka 'McKnight's Vibrant & Equitable Communities program' bartamaha masiibada, waxyar kadib kacdoonkii George Floyd, iyo kahor doorashadii Mareykanka iyo kacdoonkii Janaayo. Weli waxaan ku jirnaa daqiiqad ay dadka iyo ururrada adduunka oo dhan isweydiinayaan su'aalo ku saabsan nidaamyada isbeddelka qaab aysan waligood yeelan. Su'aalaha sida kuwan oo kale ah: "Runtii maxaa dhacaya?" "Waxa loola jeedaa?" "Oo maxay doorkeennu ku leenahay?"
Barnaamijka Vibrant & Equitable Communities wuxuu leeyahay aragti cad oo mustaqbal oo dhamaan reer Minnesota — Madow, cadaan iyo bunni; Dhalad iyo cusub; laga bilaabo Dhinaca Waqooyi illaa Xeebta Waqooyiga - waxay wadaageen awood, kaqeybgal, iyo barwaaqo.
Si loo xaqiijiyo aragtidan, waxaan u baahanahay inaan ka gudubno siyaasadda kala qeybsanaanta iyo inaan xaqiijino aaminaaddayada guud ee aan isku qabno - inaan dhammaanteen u qalanno inaan horumarinno iyadoon loo eegin sida aan u eg nahay ama halka aan ka nimid. Markaan diirada saarno qiyamka aan wadaagno, waxaan kadhigi karnaa Minnesota meel qofkasta uu kala kulmo bulshada, ladnaanta, iyo qadarinta, oo aan ku dabaaldegno waxa na mideeya iyo waxa inaga dhigaya mid aan gaar aheyn.
Ururada wareegayaga koowaad ee deeq-lacageedka waxay matalayaan noocyo kala duwan oo ku saabsan juqraafiga, jinsiyada, dhaqanka, iyo qaybaha. Sawir ayaa laga soo qaaday dugsiga Moler Barber ee ku yaal Saint Paul East Side bishii Abriil 2018.
S: Sideed uga fikireysaa isbeddelada nidaamyada?
David: Beddelaadda nidaamyadu ma aha mid toos ah, sababta qayb ka mid ahna waxay tahay in dad kala duwan ay fikrado kala duwan ka qabaan waxa isbeddelku u eg yahay iyo sida lagu gaaro. Kahor intaadan ka shaqeyn beddelida nidaamka mid loo siman yahay, waxaa muhiim ah inaad hesho faham wadaag ah oo ku saabsan macnaha taas iyo sida isbeddelku u dhacayo.
Lix bilood gudahood barnaamijkan, waxaan diiradda saareynaa sidii aan u heli lahayn faham la wadaago oo ku saabsan nidaamyada isbeddelka aan rajeyneyno inaan aragno, iyo inaan ku sinno sinnaanta hannaanka lagu gaarayo go'aannada deeqaha. In kasta oo aan wali ku guda jirno hawsha, waa kuwan su'aalaha aan isla dhex mushaaxeyno:
Maxay tahay doorkeennu aasaas ahaan? Marka laga tago sameynta deeqaha, isbeddel noocee ah ayaan maalgashi ku sameyneynaa? Miyaynu sameyneynaa deeqo si aan ugu noolaano qiimaheena, mise waxaan si fudud u kireysanaa waqtiga bulshada si aan u qabanno shaqada aan rabno? Anaga koox ahaan waxaan ubaahanahay inaan isla fahamsanaano nidaamyada isbadalka, iyo suurtagalnimada iyo awooda aan kuqabano fududeynteeda.
Sideen mid walba u aragnaa adduunka? Sideen u aragnaa isbeddel ku dhaca koox ahaan? Qof kastaa wuxuu yeelan karaa fahamka dhibaatada iyo fahamka waxa ay ururadu samayn karaan si ay u yareeyaan dhibaatada. Hase yeeshe wax kasta oo horusocod ah, waxaa muhiim ah in koox ahaan aan dhammaanteen isku aragti ka wada helno. Kaliya markaa waxaan u dhaqaaqi karnaa inaan ka shaqeyno isbedelkaas.
Maxay tahay doorkeena ka baxsan deeq-bixinta? Maxay yihiin kabalaabyada aan ka soo jiidan karno wixii ka dambeeya deeq-bixinta? Aasaasiyadu waxay leedahay door ahaan uruuriyayaal, sida saamaynta maalgashadayaasha - iyo kuwa kaleba - iyo abuurista xaaladaha ururadu ku guuleystaan siyaabo badan.
Waxaan sii wadeynaa inaan kawada hadalno su'aalahan si dherer ah isla markaana aan ku sifeyno waxa aan isku dayeyno inaan ku sameyno deeqdeena.
S: Sideed ku sharixi laheyd sida isbeddelada nidaamyadu u dhacaan?
David: Kuwa deeqda bixiya waxay u taagan yihiin qaab adag oo istiraatiiji ah oo ku wajahan nidaamyada isbeddelka aan ka qaadanay Lixda Xaaladaha FSG ee Nidaamyada Isbedelka. Nidaamkan gudahiisa, waxaan ku taageereynaa deeq-bixiyeyaasha ka shaqeynaya inay horumar ka gaaraan seddex heer oo nidaamyada isbeddela:
Isbedelka dhismaha waxaa ka mid ah isbeddelada siyaasadaha, ku dhaqanka, iyo qulqulka ilaha. McKnight wuxuu muddo dheer ka shaqeynayay heerka qaabdhismeedka si uu u wargeliyo siyaasadda dowladda, u dhiirrigeliyo dhaqammo dheellitiran oo dheellitiran, isla markaana toos ugu hago ilaha aadanaha iyo kuwa maaliyadeed ujeeddooyinkeenna. Beddelida xaaladahan qaabdhismeedku waxay leeyihiin saameyn xoog leh. Waxaan arki karnaa oo aan ku qiimeyn karnaa natiijooyinka qiimeyn dhaqameed iyo cabir.
Isbedelka xiriirka wuxuu diiradda saarayaa u wareejinta awoodda firfircoonida iyo dhisidda xiriirka iyo isku xirnaanta qaybaha iyo qeybaha siyaasadeed. Tani waa shaqo adag, gaar ahaan duruufaha siyaasadeed ee maanta jira, laakiin waxay muhiim u tahay isbeddelada muddada-dheer ee sida aan u wadaagno ilaha iyo awoodda go'aan gaarista. Isbedelada nidaamyada xiriirka ayaa sidoo kale ku jiri kara garashada iyo qiimeynta noocyada kala duwan ee aqoonta iyo khibradda.
Isbedelka isbeddelka waxay soo saartaa isbeddelka nidaamyada ugu adkeysiga badan. Waxay sidoo kale cadeyneysaa tan ugu adag, maadaama ay dadka ku riixeyso inay qaataan sheekooyinka cusub ee la wadaago iyo moodooyinka maskaxda. Moodellada maskaxdu waa wadayaal aasaasi u ah dhaqanka nidaamka, isbadal la'aan heerkan ah, hagaajinta heerarka qaabdhismeed iyo xiriir waxay u egtahay inaysan ku guuleysan doonin iibsasho ku filan dadka ka kooban nidaamka guud ahaan.
Sawirka Sawirka: Biyaha Nidaamyada Isbadala. FSG, Maajo 2018
S: Sidee deeq bixiyayaashu ugu shaqeynayaan xagga nidaamyada isbeddelka aad rajeynayso inaad sameyso?
David: Ururada ku jira wareegayaga koowaad ee deeq-lacageedka waxay matalayaan faylalka tacliinta kala duwan ee juqraafiga, jinsiyada, dhaqanka, iyo waaxda. Waxay uga shaqeynayaan qaabab awood leh sidii ay Minnesota horay ugu marin lahaayeen mustaqbalkeena aan doorbidnay. Wadajir ahaan, waxay ka shaqeynayaan yoolalka soo socda:
u dagaallamaya si loo hubiyo in dadka shaqeeya ay helaan ammaan, sharaf leh, iyo shaqo tayo sare leh;
dhisida iyo taageerida hogaaminta bulshada dhaqan ahaan laga reebay;
tijaabinta habab cusub oo cusub si loo dardargeliyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha loona dhiso hantida bulshada; iyo
u doodista si loo hubiyo in inta lagu jiro iyo ka dib COVID aan ballaarinay helitaanka guryaha iyo xasilloonida.
Ururada ku jira wareega koowaad ee deeq-lacageedka waxay matalayaan noocyo kala duwan oo ku saabsan joqraafiyada, jinsiyada, dhaqanka, iyo qaybaha. Waxay uga shaqeynayaan qaabab awood leh sidii ay Minnesota horay ugu marin lahaayeen mustaqbalkeena aan doorbidnay. ” —DAVID NICHOLSON, MUUQAALKA & BARNAAMIJKA BULSHADA AGAASIMAHA BULSHADA
S: Waa maxay halbeegyada aad u isticmaasho dib u eegista weydiimaha deeqaha?
David: Wareegii ugu horreeyay ee deeq-lacageedka, waxaan helnay codsiyo 200 ah, oo waxaan la wadaagnay ku dhowaad 100 wadahadal lala yeeshay hay'adaha weli codsan kara. Dib-u-eegista soo-jeedinta deeqaha, waxaan si ula kac ah u qorsheysannay geeddi-socod dimuqraadi ah. Mid kasta oo ka mid ah xubnaha kooxdayada barnaamijka wuxuu dib u eegis ku sameeyaa soo jeedin kasta iyadoo la adeegsanayo shuruudo si loo arko sida ay ula jaanqaadayso nidaamyadeena isbeddelka iyo istiraatiijiyadda. Waxaan isweydiineynaa su'aalahan:
Sidee tani ula jaanqaadaysaa istiraatiijiyadeena?
Sidee ururku u sheegaa inuu isbadal sameyn doono? Sidee tahay anaga u maleynayaa inay isbadal sameyn doonto
Waa maxay fursadda istiraatiijiyadeed ee ururkani soo bandhigo xilligan?
Ayaa waxtar leh, yaase la saameeyaa, yaa hogaaminaya? Maxaa muhiim ka ah Hay'ada Caafimaadka Aduunka inay tahay inaan ku yeelano wadahadalkeenna?
Su'aalahan muhiimka ahi waxay naga caawinayaan inaan fahanno sida xubin kasta oo ka tirsan kooxdu u aragto isbeddelka la soo jeediyey - haddii aan u aragno isku mid, iyo haddii kale, sababta taasi waa. Dhamaanteen waxaan nahay shaqsiyaad kala duwan oo taariikh iyo waaya aragnimo kala duwan leh. Dadka qaarkiis waxay leeyihiin aqoon durugsan, qaarna waxay leeyihiin khibrad bulsho. Tani waa waddo aan seddex geesood uga dhigno noocyo badan oo khibrad iyo sinnaan ah dooda.
S: Maxay yihiin su'aalaha badanaa ka soo kacaya deeq bixiyaashaada xagga sinnaanta?
David: Su'aal weyn oo ururro badan oo aasaas ahi ay la legdamayaan ayaa ah: "Maxay tahay doorka ururada ay hoggaaminayaan caddaanku sinnaanta jinsiyaduhu?" Heer uun, waa isdaba joog intee in leeg ayaan qaban karaa, halkee ayaan kuhogaan karaa iyo halkee ayaan raacaa? Maxaan ubaahanahay inaan sameeyo si aan ula sii joogo? Kuwani waa su'aalo muhiim ah in laga fiirsado.
Ururada midabka leh iyo kuwa ay hogaaminayaan bulshada midabada leh, tani waa waqti dhiirigalin leh. Waxay umuuqataa inay inbadan macquul tahay. Waxaan maqlaa hadalo ay ka mid yihiin: "Marwalba waxaan u maleynayay in isbedelkani dhici doono, laakiin weligay intaan noolahay." Waxay arkayaan awoodda ay si dhab ah ugu muuqan karaan isbeddel. Waxay u baahan tahay geesinimo si looga gudbo dan la’aanta loona gudbo ficil, waana tamar aan ku faraxsanahay. Waxaan ku rajo weynahay waxa iman doona.